ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ (၁၂. ၁၁. ၂၁၀၈) | Pyithu Hluttaw
(က)-မုံရွာမြို့၊ လယ်တီရပ်ကွက်၊ စည်ပင်ဝင်းအတွင်း မြေအငှားချထားသော ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကွန်ကရစ်ဖျော်စက် အား အငှားချထားပေးခြင်းမှ ရပ်စဲရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ခ)-လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ထိန်ပင်နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံမှ အမှိုက်များအား မီးရှို့ရှင်းလင်း၍ လျှပ်စစ်ဓာတ် အားထုတ်ယူခြင်း၊ စနစ်တကျအမှိုက်များသိမ်းယူခြင်း၊ အမှိုက်စုပုံခြင်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဂ)-ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မင်းဂံကျေးရွာအုပ်စု၊ တောစုကျေးရွာ သဘာဝစိမ့်စမ်းရေထိန်းတောအား နိုင်ငံတော်မှ နယ်နိမိတ်ဧရိယာသတ်မှတ်၍ ကျေးရွာပိုင်ရေထိန်းတောအဖြစ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင်‌့ရှောက် ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဃ)-ဝမ်ဖွီးသစ်တောကြိုးဝိုင်းနှင့် လွိုင်တောင်းသစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်း ကျရောက်နေသော ရွာမြေ၊ သာသနာ့မြေ၊ ယာမြေ၊ လယ်မြေများကို ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားများလက်ဝယ်သို့ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(င)-မြစ်ရေပြင် အရောင်အဆင်းပြောင်းလဲမှုသည် အမ်းမြို့နယ်နှင့် မြေပုံမြို့နယ်ရှိ မြစ်ရေပြင်များအထိ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိနေသဖြင့် ရေပြင်ညစ်ညမ်းမှုသည် မည်သည့် အကြောင်းအရင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ရသည်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ပြည်သူများအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသော သစ်အသုံးပြုခွင့်ရရှိရေးအား မည်သို့စီမံ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဆ)-ကွမ်းခြံကုန်း၊ ကျောက်တန်း၊ သုံးခွနှင့် ခရမ်းမြို့နယ်များရှိ မုတ္တမပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း ကုန်းတက်မြေ ၂၇၇၃၈ ဧကအား ဒီရေတော၊ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအဖြစ် သတ်မှတ်ဖော်ဆောင်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်